I-SACP ayizukweseka muntu kwababheke esokuhola i-ANC | News24
I-SACP ayizukweseka muntu kwababheke esokuhola i-ANC
JOHANNESBURG - Isigungu esiphezulu ku-South African Communist Party (SACP) sikhiphe isinqumo sokungabi nemibono ngothandwa yibo ekuholeni i-African National Congress.
AmaKomanisi asho lokhu ngesikhathi ebambe isithangami sabezindaba ngemuva komhlangano ababe nawo lapho ubuholi babo bukhethe ukungeseki muntu njengoba sekusondele inkomfa ye-ANC.
Yize kunjalo, le nhlangano iyalele amalungu ayo ukuba avumelane ngevoti lawo ukuze bezokhipha i-ANC kule nkinga yobuholi obuntekenteke.
OLUNYE UDABA:Izinguquko ezenziwe uZuma zizolimaza ubudlelwane ne-SACP - Mantashe
UNobhala Jikelele we-SACP uBlade Nzimande uthe: "Okokuqala, ubuholi kumele bulungiselelwe kahle ukuze bukwazi ukuqhubeka nokulwa nenkinga yokugodlwa kwamandla ombuso, kanye nezinye izinhlobo zenkohlakalo futhi bakwazi nokuzehlisa, kusungulwe ukhomishana ozopheywa ngokugodlwa kwamandla ombuso kanye nezinye izinsolo zobugebengu ngaphandle kokwesaba noma ukukhetha iphela emasini."
Njengoba sekusele amasonto amabili iqale inkomfa enkulu yokukhetha ubuhole be-ANC, izifundazwe eziningi zikubeke kwacaca ukuthi babili abaphakanyiselwe ukulwela lesi sikhundla, yiPhini likaMenagmeli uCryil Ramaphosa kanye noDkt Nkosazana Dlamini-Zuma.
IGauteng isanda kuveza ukuthi amagatsha ayo amaningi ahamba noRamaphosa, lesi sifundazwe sijoyina iNorthern Cape, Western Cape ne-Eastern Cape, kubika i-EWN.